Gịnị kpatara lọjistik ji dị mkpa na ecommerce? | ECommerce ozi ọma
Gịnị kpatara lọjistik ji dị mkpa na ecommerce?
Onye ọ bụla na-ere ahịa igwe ojii ga-enwerịrị a isi nghọta nke ihe ọ pụtara inwe usoro nhazi. Ọbụna ndị ahịa na-enweghị ahụmahụ na akụkụ a, n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, ha na-emikpu onwe ha na a lọjistik usoro na- zipu onye ahịa gị ka ha nye iwu.
Anyị nwere ike ịkọwa a ngwa ahia nke ụlọ ahịa ecommerce dị ka usoro usoro nke a na-eme maka onye ahịa iji nweta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị ozugbo emere iwu. A na-akpọ ya agbụ n'ihi na ihe omume niile, site na ntinye ntinye ruo na nnyefe ikpeazụ, jikọtara ibe ha.
Ọ dị mkpa kọwaa njikọ ndị e ji arụ ọrụ na lọjistik maka eziokwu dị mfe ma dịkwa mfe site na ịme nke a, anyị ga-enwe ike ịchọpụta ndị anyị nwere ike idafu ego, ma ọ bụ nke anyị nwere ike meziwanye iji nye ndị ahịa anyị ezigbo ọrụ na ogo. Otutu ulo oru ntanetị na-agbaso usoro oru ndi a.
Onye ahịa na-etinye iwu
A natara iwu ahụ ma nyochaa ịdị adị ya na ụlọ nkwakọba ihe.
Iwu ahụ kwadoro ma kwụọ ụgwọ ahụ
A na-eke akwụkwọ ọnụahịa na akwụkwọ ndị ọzọ dị mkpa maka mbupu
Ejiri ngwugwu ma tinye aha ya
A na-ezigara ya onye ahịa.
Ego anabatara ma zụrụ emechi
Njikọ njikọ na agbụ nwere ike ịgbanwe dabere n'ọnọdụ ọ bụla na azụmaahịa ọ bụla, mana ụdị a bara uru dịka ihe ndabere maka ịkọwapụta ya gị ụlọ ọrụ lọjistik yinye. Ozugbo inwere ya, ọ bara uru ịga njikọ site na njikọ na-achọ ike, adịghị ike, ohere na egwu nke onye ọ bụla n'ime ha. Ọ bụrụ n’ị na-agabiga usoro a site n’oge ruo n’oge, ị ga-ahụ na ị ga-enwe sistemu na-arụ ọrụ nke emelitere mgbe niile ma ị ga - enwe ike inye ndị ahịa gị ọrụ ka mma
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » CMS na Teknụzụ » Nkuzi na akuru » Gịnị kpatara lọjistik ji dị mkpa na ecommerce?
Mbupu n'efu, ihe niile ịchọrọ ịma
Mee ka ahia gi bawanye n’oge ahia